Ciidamo Loo Soo Tabobari Lahaa Somaliya Oo Lagu Bedelay Uganda Ciidamo U Dhashay +Sawiro .
Tuesday April 04, 2017 - 01:23:34 in Wararka by Halgan News
Kampala(Halgan)Ciidamo aad u badan oo la filaayey in loo soo tabobaro dawlada Somaliya ayaa noqday kuwo lagala kulmo dhacdo la yaab leh .
Ciidamadan ayaa isu bedelay ciidamo reer Uganda ah , halka la doonaayey in tabobarkaasi la siiyo ciidamada dawlada Somaliya, waxaana la saadaalinaayey inay kamid noqdaan ciidamo badan oo loo tabobari lahaa dawlada Somaliya, waxaana hadda tabobarkaasi qaatay ciidamo Ugands ah .
Ciidamada ayaa iman doona dhowaan dalka Somaliya, iyaga oo tiro ahaan gaadhaaya ilaa 1,845 askari, iyada oo uu khudbadii ugu dambaysay u jeediyey taliyaha guud Ee ciidamada Uganda General David Muhozi .
Ciidamada ayaa la filayaa inay toddobaadka soo socda dalka Somaliya yimaadaan, iyaga oo ka hawl geli doona caasimada Muqdisho iyo degaanka Afgooye.
Arrintan ayaa meesha ka saaraysa rajadii ahayd inay ciidamada Somaliya helaan tabobaraddii loogu talo galay iyo inay iyagu si buuxda u sugaan nabadgelyada wadankooda, waxaan taas dhigeeda lagu soo daabulayaa wadankaasi ciidamadasi shisheeye ee bedelaaya kuwa Somaliya.